Chate Sat | Reliable freelancers for your business အလွတ်တန်းပညာရှ... - Chate Sat | Reliable freelancers for your business
သင်​့လုပ်​ငန်​းနဲ့ပတ်​သတ်​ပြီး အထူးကျွမ်​းကျင်​သူတစ်​​ယောက်​ လိုအပ်​​နေပါသလား? သို့မဟုတ်​ အလွတ်​တန်​းပညာရှင်​များနှင်​့ အလုပ်​လုပ်​ဖို့ စဉ်​းစားနေပြီလား? အပြိုင်အဆိုင်တွေများတဲ့ ဒီကနေ့ခေတ်မှာ သူများတွေထက် ခြေတစ်လှမ်းအမြဲသာနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ခေတ်နှင့်လျော်ညီစွာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေနှင့် အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းတွေကိုလည်း အကျိုးရှိစွာ အသုံးချသင့် တဲ့အချိန်အခါပဲဖြစ်ပါတယ်။
နည်းလမ်းဟောင်းတွေကို အသုံးပြုခြင်းက စိတ်ချရတယ် ဆိုပေမယ့် နည်းလမ်းအသစ်တွေဟာ သင့်လုပ်ငန်းကို ပိုမိုမြန်ဆန် ကောင်းမွန်အောင် ကူညီပေးနိုင်နေပါပြီ။အလွတ်တန်းပညာရှင်များနဲ့ အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အသွေးတွေကို ရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ဘာကြောင့် အလွတ်တန်းပညာရှင်များနှင့် အလုပ်လုပ်သင့်သလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ​ဆောင်​းပါး​လေးဟာ သင်​့လုပ်ငန်းကို ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး အလုပ်တွင်ကျယ်စေဖို့ အ​ထောက်​ကူပြုပါလိမ်​့မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာ​။
အကယ်၍ အချိန်ပြည့်၀န်ထမ်းတစ်ယောက် ငှားရမ်းတော့မည်ဆိုလျှင် အလုပ်လုပ်ဖို့ ရုံးခန်းနေရာ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ နှင့် အခြား အထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေကို ထောက်ပံ့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို ငှားရမ်းအသုံးပြုမည် ဆိုလျှင် ထိုအရာတွေအတွက် ခေါင်းကိုက်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေဟာ သူတို့မှာအဆင်သင့်ရှိပြီးသား အသုံးဆောင် ပစ္စည်းတွေနဲ့ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေနဲ့ ရုံခန်းနေရာတွေအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
လုပ်ငန်းနှောက်နှေးစေမယ့် အရာတွေကို လျော့ချပေးနိုင်ခြင်း
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ အချိန်ပြည့်၀န်ထမ်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍ အချိန်ပြည့်၀န်ထမ်း တစ်ယောက်ဟာ ကျန်းမာရေးမကောင်း၍ သော်လည်းကောင်း၊ အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် ရုံးမတက်နိုင်လျှင် လုပ်ငန်းကို အနည်းငယ်နှောက်နှေးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အချိန်ပြည့်၀န်ထမ်းတွေရဲ့ အလုပ်ချိန်ဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ၁ ရက်ကို ၈ နာရီရှိတာကြောင့် ရုံးချိန်ပြင်ပမှာ အလုပ်လုပ်ရန် တိုက်တွန်းဖို့ အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ တိုက်တွန်းခဲ့လျှင်လည်း ပုံမှန်လစာအပြင် အချိန်ပိုကြေးပါ ထပ်မံ ပေးဆောင်ဖို့ လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အလွတ်တန်းပညာရှင်တယောက်ကိုသာ ငှားရမ်းအသုံးပြုမည် ဆိုပါက ၂၄ နာရီ သင့်လုပ်ငန်းကို ကူညီဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် အချိန်ပိုကြေး ထပ်မံပေးစရာမလိုသလို အလုပ်တွေကိုလည်း အချိန်မှီပြီးစီးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အနေဖြင့် အမြဲတမ်းလုပ်စရာမလိုသော ပရောဂျက်များကို လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါက အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေဟာ အသင့်တော်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Content Marketing, Graphic Design for Promotion သို့မဟုတ် Distributing Flyer စသည့် ပရောဂျက်များနှင့် အခြားသော ပရောဂျက်များအတွက် အချိန်ပြည့်၀န်ထမ်းများကို အရင်ကလို ခန့်ထားစရာမလိုအပ်တော့ပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်သော အလွတ်တန်းပညာရှင်များက သင့်လုပ်ငန်းအတွက် တာ၀န်ယူလုပ်ကိုင်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - တစ်လကို Graphic Design ၄ ခုလောက်ပဲ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် Graphic Designer တစ်ယောက် ငှားရမ်းအသုံး ပြုခြင်းထက် အလွတ်တန်း Graphicer Designer တစ်ယောက်ကို ငှားရမ်းအသုံးပြုခြင်းဟာ လုပ်ငန်း ဘတ်ဂျက်ကို ချေွတာပြီသားဖြစ်သလို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အလုပ်တွင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် တစ်ချို့သော အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ဖို့ အချိန်ပြည့်၀န်ထမ်းတွေ ငှားရမ်းခြင်းထက် အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို ငှားရမ်းအသုံးပြုခြင်းဟာ များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သလို လုပ်ငန်းလည်း တွင်ကျယ်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို ငှားရမ်းအသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ project ကို တာဝန်ယူပေးမဲ့ ထောင်ပေါင်းများစွာသော အလွတ်တမ်း ပညာရှင် Freelancer တွေနဲ့အတူ ချိတ်ဆက်အဖွဲ့သားများ မှ သင်နှင့် သင့်လုပ်ငန်းကို ကူညီဖို့အချိန်မရွေး အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။